July 9, 2021 426
पछिल्लो समय निकै संक्रामक भनिएको डेल्टा र डेल्टा प्लस भे’रियन्टका कारण फेरी एक पटक सर्वसाधारणलाई ड’र उत्पन्न गराएको छ । ताजा तथ्यांकले केही समययता तीव्र गतिमा फैलिरहेको डेल्टा भेरिएन्टबाट संक्रमितले पछिल्लो वर्ष सुरुवातका लक्षणभन्दा फरक अनुभव
गरिरहेका छन्। भारतीय मिडिया अमर उजालाले बेलायतको ताजा विवरणले साधारण रुघाखोकी पनि अब कोरोनाको लक्षण हुन सक्ने देखाएको जनाएको छ । अस्ट्रेलियाको ग्रिफिथ युनिभर्सिटीअन्तर्गत सं’क्रा’मक रोग एवं भाइरोलोजिस्ट अनुसन्धान प्रमुख लारा हररोका अनुसार हरेक मानिसमा प्रतिरक्षा प्रणाली फरक फरक हुन्छन्। यसैकारण एकै भाइरसले गर्ने संक्रमणमा पनि अलग अलग लक्षण देखिन सक्छन्। ***अन्य थप समाचार हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला***
श्रीमान अपार्टमेन्टमा नभएको बेलामा उनले यस्तो बाटो रोजेकी थिइन् । महानगरीय प्रहरी वृत्त बानेश्वरका डिएसपी मिमबहादुर लामा नेतृत्वको टोली र फरेन्सिक चिकित्सकले शवको अवस्था र घटनास्थलको प्रारम्भिक अनुसन्धान गरेका छन्
Prev‘पुलिस दाजु ! त्यस्तो केही पनि छैन् म आफैंले गरेको हो’ जेनी कुँवरको नोट…?
Nextसरकरले विद्यालय सञ्चालन गरिने मिती तोक्यो।भर्खरै आयो विद्यालय खुल्ने खबर।